June 2020 – Shwe Sar
အိမျနီးခငျြး နယျစပျဒသေ မြားတှငျ တရုတျ ပွဿနာဖနျတီး နကွေောငျး အိန်ဒိယနှငျ့ အာဆီယံနိုငျငံမြားက စှပျစှဲပွီးနောကျ မွနျမာ ၌လညျး အလားတူ စှပျစှဲခကျြ ထှကျပျေါ
Shwe Thit | June 29, 2020
အိမ်နီးချင်း နယ်စပ်ဒေသ များတွင် တရုတ် ပြဿနာဖန်တီး နေကြောင်း အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများက စွပ်စွဲပြီးနောက် မြန်မာ ၌လည်း အလားတူ စွပ်စွဲချက် ထွက်ပေါ် အေ အေ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အပါအဝင် ပြည်တွင်း သူပုန် အုပ်စု တို့ကို ပြည်ပက လက်နက် တပ်ဆင်ပေး လျှက် ရှိကြောင်း မြန်မာက
ရငေုပျသင်ျဘော သုတသေန စာတမျးတှေ တရုတျဆီ သူလြိုလုပျ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ နိုငျငံသားကို ရုရှား ဖမျးဆီး…
Shwe Thit | June 24, 2020
ရေငုပ်သင်္ဘော သုတေသန စာတမ်းတွေ တရုတ်ဆီ သူလျိုလုပ် ပေးပို့ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံသားကို ရုရှား ဖမ်းဆီး… အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေး ဆိုးရွားနေချိန် နှ စ်နိုင်ငံကြားနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ဆံရေးကောင်းလာတဲ့ ရုရှားနိုင် ငံကလည်း တရုတ်နိုင်ငံ ကို သူလျိုမှုနဲ့စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ စိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်ျအာ တိတ် လူမှုသိပ္ပံအကယ်ဒမီပါေ မာက္ခချုပ်ဗလာရီ မစ်ကိုဟာ တရုတ်ထော က်လှမ်းရေးတွေဆီ
ကပိုကရို ပုံစံလေးနဲ့ အမိုကျစားပို့ဈတှေ အပီအပွငျပေးပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ပုံရိပျတှေ ကို ခပြွလိုကျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
Shwe Thit | June 20, 2020
ကပိုကရို ပုံစံလေးနဲ့ အမိုက်စားပို့စ်တွေ အပီအပြင်ပေးပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေ ကို ချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ေ ကျာ်ကတော့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ဇာတ်ကားေ တွ အမြောက်အများရို က်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သင်ဇာဝင့်ကျော်က ပုရိသတြွေ ကားမှာ အရမ်းကို ရေပန်းစား နာမည်ကြီးနေသူေ လးအဖြစ် အရင်ကထက်တောင်
ခဈြသူငယျခငျြး ဖွဈတဲ့ မသေနျးနု လှတျလာ လို့ အပြျောကွီး ပြျောနတေဲ့ ရနျအောငျ
Shwe Thit | June 17, 2020
ချစ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ မေသန်းနု လွတ်လာ လို့ အပျော်ကြီး ပျော်နေတဲ့ ရန်အောင် နာ မည်ကျော်ဝါရင့် မင်းသားတစ်လက်ြ ဖစ်တဲ့ ရန်အောင်ကို ပရိသ တ်တွေက ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထ င်ပါတယ်။ ရန်အော င်ကတော့ ဗီဒီယိုခေတ် ကတည်းက ကျရာကာရိုက်တာကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက် ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အောင် ကတော့
Shwe Thit | June 15, 2020
ပရိတ်သတ်ကို အမြင်ဆန်းစေတဲ့ အမိုက်စား ၀တ်စုံနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ် ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ ပန်းရောင်ခြယ်က နိုင်ငံကျော်အ ဆိုတော် ဂရေဟမ်ရဲ့ သမီးကြီးဖြစ်တာေ ကြာင့် မသိသူ မရှိသလော က်အောင်ပဲ ချစ်ဖေေ ဖဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်သူလို့လဲ အများက ချီးကျူးပြော ဆိုတာကို ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ဂရေဟမ်နဲ့အတူ
မနကျစာ” မစားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာ နိုငျတဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
Shwe Thit | June 7, 2020
မနက်စာ” မစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာ နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ (၁) နှလုံးကျန်း မာရေးကို ထိ ခိုက် စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာ မစားတဲ့ အမျိုး သားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ 27% ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာ မစားတဲ့သူတွေက နာတာရှည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုး၊
Shwe Thit | June 4, 2020
“စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနည်း” (အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်) ၁။ သူများ​ပြော တိုင်း လိုက်ပြီး မခံစားနဲ့။ (ပိန်တယ် ၊ဝတယ် ၊ပုတယ်၊ ရှည်တယ် ၊ဖြူတယ်၊ မဲတယ်၊ နှိ မ်တယ်၊ ကဲ့ရဲ့တယ် စသည်ဖြင့်) ၂။ ပြီးခဲ့တဲ့ ​ဒေါသထွက် စရာ​တွေ စိတ်မ ချမ်းသာ စရာ​တွေ ပြန် မ​တွေးနဲ့။
ဥပုသျ သီလစောငျ့ခွငျး အဓိပ်ပါယျ ~ ရှယျ၍ ဖတျတော့ မိတျဆှေ မြားလညျး သိရတာပေါ့ ….
Shwe Thit | June 1, 2020
ဥပုသ် သီလစောင့်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် ~ ရှယ်၍ ဖ တ်တော့ မိတ်ဆွေ များလည်း သိရတာပေါ့ …. ဥပုသ် သည် အချုပ်အာြး ဖင့် (၁) အရိယာ ( မြတ်သော ) ဥပုသ်၊ (၂) ဂေါပါလ (နွားကျောင်းသားေ စာင့်နည်း) ဥပုသ် ဟု ၂-မျိုး